UGAAR AH DUMARKA: 4 Calaamadood Oo Lagu Garto In Ninka Uu Yahay Mid Haweenka Ugacan Qaada - Aayaha
Ma jirto wax ka welwel badan inaad jeclaato nin rabshad badan oo haweenka u gacan qaada.
Waa sida adigoo qotay godkii lagugu duugi lahaa, xaqiiqdana waxaad heleysaa markii nin noocaas ah aad god ugu gasho.
Aad ayay u adagtahay inaad ka baxdo godkooda, waa wax la ogyahay in haweenka ay jeclaadaan rag noocaas ah balse way isqariyaan sidii rag wanaagsan markaas oo ay adagtahay inaad ogaato waxa ay yihiin. Balse waxaa jira calaamado lagu garto ragga noocaas ah.
Ragga kibirka badan qofna xushmad uma hayaan haddii ay noqon lahayd, qoyskooda iyo saaxiibadood.
Marka uu qofka uu yahay midaan xushmad kuu heyn, si fudud ayuu kuu dhaawici karaa. Haddii ninka aad jeceshahay amaba ku qaba uusan ogoleyn inaad saxdo ama uu qof kale saxo, waxay noqon kartaa calaamad muujineysa inuu yahay nin gacan qaad badan oo halis ku ah mustaqbalkaaga.
Ragga haweenka garaaca qaarkood waxay aaminsanyihiin haweeneyda in la garaaco ay wanaagsantahay isla markaana taas ay keeneyso inay toosto oo howshii ay qaban jirtay mid kabadan ay qabaneyso waana fikrad qalad ah.
Waa mid sheegasho badan
Waa caadi inaad maseerto balse marka maseerka uu noqdo xad kabax, waxaa imaaneysa halis.
Ninka sheegashada iyo maseerka badan wuxuu haweeneydiisa u arkaa dhul iyo hanti uu isaga leeyahay; wuu necebyahay marka rag kale ay usoo dhawaadaan, xittaa saaxiibadiisa aadka ugu dhow, isku day walba oo haweeneydaas ku damacdo inay ninka iskaga dhiciso ama raggaan waa qabaarada ay ku tiraahdo waxay sababyaan inuu u gacan qaado ama uu garaaco.
Sidoo kale haddii uu yahay nin kalsooni darro qaba oo mar kasta ka baqa inuu ku waayo amaba dareema inaad qiyaaneyso, ma laguugula talinayo inaad la joogto sababtoo ah wuxuu ogyahay inuu maalin uun ku weynayo taasoo keeneysa inuu caradiisa kaala dul dhaco oo uu dhibaato xoogan ku gaarsiiyo.
Waa mid caro badan
Haddii uu yahay nooca isfaham waa kasta oo yar dhab u qaata oo si deg deg ah ku carooda ama nooca aanan naftiisa xakameyn Karin marka uu caroodo, kaasi oo qarax socda waana inaadan ag joogin qof noocaas ah.
Ragga carada badan waa kuwo gacan qaad badan, gaar ahaan marka ay caroodaan.
Kan daroogada iyo qamriga isticmaala
Ragga qamriga aadka u isticmaala caadiyan waa kuwo xaasaskooda garaaca gaar ahaan marka ay cabaan.
Sidoo kale ma jiro qamriya cab ixtiraama xaaskiisa, waligeed ma dhicin taas.
Dhibaatooyinka loo geysto haweenka haweenka waa dambi la isku ciqaabo sababtoo ah haweenku waa masaakiin.
Haweenka waxay mudanyihiin in la jeclaado oo la qadariyo ma ahan in la garaaco oo lagu xad gudbo.
Haweenka dhankooda waxaa laga doonayaa inay iska ilaaliyaan wax kasta oo raggooda ay u arkaan kuwo aanan wanaagsaneyn ama dhib. Balse haddii aad ku aragto gacan qaad ama inuu halis gelinayo naftaada fadlan ka carar xittaa hadii uu ka macaanyahay wax kasta oo aad aragtay oo macaan.
Jacaylku ma ahan dabin dhimasho; waa mid keena farxad iyo nolol qurux badan.
Fekerkaaga hoos noogu reeb, mahadsanid.